Laamaha Amniga oo sheegay in la soo qabtay rag lagu tuhmayo dilalkii ka dhacay Muqdisho | Sagal Radio Services
Afhayeenka Wasaaradda Amniga gudaha C/kaamil Macalin Shugri ayaa sheegay in howl galo ciidamada booliska iyo kuwa Nabadsugida Gobolka Banaadir ay ka sameeyeen illaa afar degmo lagu soo qabtay dad lagu tuhmayo dilalkii dhacay, hub iyo gaadiid.
“Saacadihii u dambeeyay dilalka ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa loo soo qabtay dad lagu tuhmayo, waxaa howl galada laga sameeyay degmooyinka Wadajir, Kaxda, Hodan iyo Yaaqshiid, rag hubeysan oo heybteeda la helay ayaa la qabtay, gaadiid ay ku jireen guryo iyo garaasho ayaa la soo qabtay”ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in la soo qabtay maleeshiyaad hubeysan oo aan wali heybtooda la cadeyn iyo cida ay ka tirsan yihiin, kuwaasoo gaarayay 7 ruux.
Illaa lix ruux ayaa saacadihii u dambeeyay lagu dilay magaalada Muqdisho, waxaana dilalkooda loo adeegsaday gaadiid ay wateen rag hubeysan.
Al-Shabaab ayaa sheegatay dilalkii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo madaafiic hoobiyeyaal ah oo shalay lagu riday Madaxtooyada.